Soo ogow bangiyada muuqaalka bilaashka ah ee ugu wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Soo ogow bangiyada muuqaalka bilaashka ah ee bilaashka ah
Judit Murcia | | dhowr
Sawirada aan u adeegsano mashaariicdeena waa inay ahaadaan kuwa tayada ugu macquulsan, oo lagu hagaajiyay baahiyaheena. Haddii aadan haysan ilahaaga, ha walwelin, tan iyo waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah bangiyada sawirka bilaashka ah si aad u hesho natiijada muuqaalka ugu fiican
Way iska cadahay taas bangiyada sawirka bixiya waxay bixiyaan dalab aad u badan kheyraadka, laakiin mararka qaarkood miisaaniyadda lagu maalgelinayo nama soo gaarto, ama uma qalanto iyada oo la helo waxyaabo kale oo ka madax bannaan xuquuqda lahaanshaha. Intaas waxaa sii dheer, haddii ay ka kooban tahay shaqo ama bog shaqsiyeed, ilaha aan hoos ku tusi doono waxay ka badnaan doonaan ku filan mashruucan noocan ah waxayna ka badnaan doonaan baahideena.
1 Shatiga Creative Commons CC0
Shatiga Creative Commons CC0
El Creative Commons Waa a urur aan macaash doon ahayn. Waxay ku taal California, Mareykanka. Waxay u heellan yihiin damaanad-qaadka qorayaasha qaybo kala duwan xaddidaadda dhiig-miirashada shaqadooda ama abuuritaanno ku jira Internet. Dhinaca kale, waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si sharci ah u isticmaalaan mashaariicda ama shaqooyinka kuwa kale, illaa iyo inta shatiyada la ixtiraamo.
hay noocyada kala duwan ee rukhsadaha Hal Abuur. Astaamaha muuqaalka ee kaladuwan waxay laxiriiraan midkasta oo rukhsadaha ah iyo, sidaa darteed, rukhsadaha kaladuwan ee midkasta oo kamid ahi ogolaado
Websaydhada aan kuu soo bandhigno, badankoodshatiyada uu CC0. Waxay ku saabsan tahay shatiga Hal-abuurka Hal-abuurka ah. Xaaladdan oo kale, dhammaantood waa qaybahaas iyada oo aan wax xuquuq ah loo hayn. Taasi waxay ka dhigan tahay inay ka yimaadeen qaybta dadweynaha waadna u adeegsan kartaa ku dhowaad shuruud la’aan. Waa in maskaxda lagu hayaa inay leeyihiin xoogaa xad ah, xitaa haddii ay ugu yar tahay. Tusaale ahaan, isticmaalkeeda waa ka mamnuuc goob kasta oo rabshad ama qaangaar ah.
Bangigan sawirka waa mid aad u fiican, wuxuuna noo siiyaa waxyaabo badan oo qaab ah bilaash. Hayso a tiro badan oo sawir qaadayaal ah oo u oggolaanaya boggan inuu lahaado qalab tayo sare leh. Sidaan hore kuugu sheegnay, sawiradaadu waxay leeyihiin shati Hal Abuur Hal Abuur ah (CC0).
Pexels Waxay leedahay dalab weyn maaddaama ay tahay bogga loo qoondeeyey ka soo qaado sawirro bangiyada kale ee muuqaalka bilaashka ah isla bogga.
Waan xaqiijin karnay taas Aadaabta waa mid ka mid ah bangiyada sawirada leh ee ruqsad haysta ee CC0-ka ah ee internetka maanta. Sawiradaada tayada sare leh oo aan qiimo lahayn. Intaa waxaa dheer, oo aad muhiim u ah, waxay leeyihiin koritaan joogto ah oo noo oggolaanaya inaan helno waxyaabo cusub oo si joogto ah dib-u-warshadayn.
Muuqaal kale oo ka mid ah boggan ayaa ah xaqiiqda ah in la gujin karo qoraaga isla markaana uu awoodi karo inuu arko shuqulladooda oo dhan isla markiiba. Tani waxay naga faa'iideysan kartaa markaan raadineyno in dhammaan hal-abuurayaashu ay raacaan isla aragtida muuqaalka ah.
Bangigan muuqaalka ahi wuxuu leeyahay a noocyo kala duwan oo tayo sare leh. Runtii isagu waa xirfadle oo ka mid ah sawirradiisa, muuqaallada iyo dabeecadda ayaa ugu badan. Khasaaraha kaliya ee aan helnay waa taas dhamaan ilaha ay na tusayaan maahan kuwa shati ka haysta CC0.
Waxaan jeclaan lahayn inaan ku nuuxnuuxsanno, raadintaada, annaga Waxay u oggolaaneysaa shaandhaynta heerar kala duwan sida:
Sida lagu qeexay, Freepik waa bog loogu talagalay “Kheyraadka sawir ee qof walba ”. Markaan nidhaahno "Qof walba" waa sabab aad u fudud, marka lagu daro sawirrada waxay leeyihiin ilo kale oo aad u faa'iido badan. Isaga bixinta Waa sida soo socota:
Intaa waxaa sii dheer, mashiinkaaga raadinta waxaan si toos ah uga dhex dooran karnaa lacag la'aan ah ama alaab qiimo leh. Waxay leedahay fursado ballaaran oo aan ku isticmaali karno hal xaalad, si aan ugu soo qaadno qoraaga si habboon. Dhinaca kale, ikhtiyaarka lacag-bixinta, wicitaanka Premium waa isla qiimo jaban. Bixinta a xaddiga ku dhowaad 9 euro bishiiba waxaad marin u heli kartaa ilo badan oo badan iyada oo aanad u baahnayn inaad sheegto qoraaga.
También existen sawirada bangiyada ku takhasusay waaxda, xaaladdan, waa a barxad udub dhexaad u ah kheyraadka halkaas oo cunnadu ka muuqato. Soojeedintu ma noqon karto mid aad u ballaaran, laakiin waa in la ogaadaa in sawirada tayada iyo xirfadda sawirradoodu ay aad u fiican yihiin. Haddii aan ogaanno sida looga faa'iideysto ilaha oo aan caqli gal nahay waxaan gaari karnaa natiijooyin aad u fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Soo ogow bangiyada muuqaalka bilaashka ah ee bilaashka ah
Mastercard iyo ugubkeeda si loo sameeyo astaan: sumadeynta maqalka
Mawduucyada rasmiga ah ee Chrome ayaa hadda laga heli karaa Kaydka Websaydhka Chrome